WAR DEG DEG AH:Xaalad cusub oo kasoo korodhay Laascaanood & Gaadiid badan oo xabsiyada dhex yaala
October 17, 2019 Farah Abdikadir Mohamed 1
HARGEYSA(P-TIMES)- Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu haatan ka helayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan in cirka ay isku sii shareertay xiisadii u dhaxaysay dowladda hoose ee degmada Laascaanood iyo Darawalada gaadiidka Mooto Bajaajta loo yaqaan, kadib markii amaro culus la dul dhigay.
Wararku waxa kale oo ay intaasi kusii darayaan in xiisadu ay sii korodhay markii Maayerka degmada Laascaanood uu amar ku bixiyey in xabsiyada la dhigo Bajaajyo badan isla markaasna ay hadii ay doonayaan in loo soo daayo dhalinyarada muruq maalka ah ee ku shaqaysta ay bixiyaan lacag dhan 300 oo Dollar oo ganaax ah sidoo kalena ay aqbalaan Tarre la sheegay in loo samaynayo Bajaajlayda taas oo sababtay in buuq iyo dagaal uu dhex maro labada dhinac.
Xaafadaha magaalada iyo guud ahaanba magaalada Laascaanood ayaa waxaa laga dareemayaa gaadiid la’aan xoogan, waxaana dhalinyaradii ku shaqaysan jirtay gaadiidkaasi Mooto Bajaajta ay sheegeen in aysan ku qanacsanayn go’aankaasi kasoo baxay Maayerka degmada Laascaanood.
Khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ayaa sii xoogaysanayna waxaana xaalku uu haatan marayaa in awood ciidan loo adeegsado shacabka iyo dhalinyarada ku shaqaysan jirtay gaadiidkaasi.
Taliyaasha ciidamada Somaliland iyo maamulka gobolka Sool ayaa iyaguna dadaal xoogan ku bixinaya sidii xal loogu heli lahaa arintani oo sababi karta dagaal mar kale ku dhex mara gudaha magaalada shacabka iyo ciidamada Somaliland oo xiligani awood u isticmaalaya shacabka ku dhaqan Laascaanood.
Dhalinyarada laftirkeeda ayaa laga filan karaa in arintoodu ay sababto isku dhac cusub sida uu Puntlandtimes.com u sheegay mid kamid ah Darawalada gaadiidkoodu weli ku xaniban yahay xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood.
HALKAN HOOSE KA DAAWO WARARKII UGU DAMBEEYEY
“Waan dagaalamaynaa hadii ay sidani wax kusii socdaan waxaa nalaga qaadaa cashuur waana bixinayaa hadana sidaas oo ay tahy waxba nalooma qabto, waxani waa dulmi mana aqbalayno hadii kale waa in Boorame iyo Burco laga hirgaliyaan nidaamkani aan ahayn dagaal baan ka xignaa waayo waxba nalooma hadhin” sidaasi waxaa yidhi Maxamed Jaamac oo kamid ah Bajaajlayda magaalada Laascaanood.
Inkastoo magaalada Laascaanood ay ku sugan yihiin Bajaajyo dhif iyo naadir ah oo ka bad baaday hawlgalkii lagu qab qabtay ayaa waxaa hadana sii xoogaysanaysa xiisada oo sababi karta dagaal hadii xal loo helin.
Shalay sow iyagu ma keenin cidaan, hala wasee dhaaf, kuwaas dhiig lo, baa ku jira.